Location: Mbido » Ịdee » Ozi waya » Ụzọ ọhụrụ iji gbochie mmetụta dị egwu nke ọgwụgwọ ọrịa cancer
Ndị ọkachamara na Cincinnati Ụmụaka na-akọ, na ụmụ oke, na ọgwụgwọ mgbochi mmadụ nwere ike ime ka ndụ dịkwuo mma mgbe ụfọdụ ụdị 'oké ifufe cytokine' dara.
Ma ọ bụ ụmụaka na-anagide ọrịa ọrịa autoimmune na-adịghị ahụkebe ma ọ bụ ndị ọrịa kansa na-achọ ọgwụgwọ ọgwụgwọ ọhụrụ na-ekwe nkwa, ọtụtụ ndị mmadụ na-amụta maka ụdị mmeghachi omume sistemu na-egbukarị egbu nke a na-akpọ “oké ifufe cytokine.”
Ndị dọkịta na ndị ọkà mmụta sayensị maara banyere oké ifufe cytokine ruo ogologo oge makwaara na ọtụtụ ihe nwere ike itinye aka n'ịkpalite ha, na naanị ọgwụgwọ ole na ole nwere ike ibelata ha. Ugbu a, otu sitere na Cincinnati Children'smụaka na-akọ ihe ịga nke ọma n'oge mmalite n'imebi ụfọdụ oké ifufe cytokine site na ịkpaghasị akara na-esite na mkpụrụ ndụ T agbagoro n'ime sistemu ahụ anyị ji alụso ọrịa ọgụ.
Ebipụtara nchoputa zuru ezu Jan. 21, 2022, na Science Immunology. Ọmụmụ ihe ahụ nwere ndị edemede atọ: Margaret McDaniel, Aakanksha Jain, na Amanpreet Singh Chawla, PhD, ha niile na Cincinnati Children's mbụ. Onye odee akwụkwọ sekọndrị bụ Chandrashekhar Pasare, DVM, PhD, Prọfesọ, Division of Immunobiology na Co-Director of Center for Inflammation and Tolerance na Cincinnati Children's.
"Nchọpụta a dị mkpa n'ihi na anyị egosila, n'ime ụmụ oke, na ụzọ usoro mkpali nke na-etinye aka n'ụdị oké ifufe cytokine nke T cell nwere ike ibelata," ka Pasare na-ekwu. "A ga-achọkwu ọrụ iji gosi na ụzọ anyị si eji ụmụ oke nwekwara ike ịdị mma ma dị irè maka ụmụ mmadụ. Mana ugbu a, anyị nwere ebumnuche doro anya anyị ga-achụ.”
Kedu ihe bụ oké ifufe cytokine?
Cytokines bụ obere protein na-ezo n'ụdị sel ọ bụla. Ọtụtụ cytokines amaara na-arụ ọtụtụ ọrụ dị mkpa na nke nkịtị. N'ime usoro ahụ ji alụso ọrịa ọgụ, cytokines na-enyere aka iduzi mkpụrụ ndụ T na sel ndị ọzọ na-alụso ọrịa ọgụ iji wakpo ma kpochapụ nje na nje bacteria na-awakpo yana ịlụso ọrịa cancer ọgụ.
Ma mgbe ụfọdụ, "oké ifufe" cytokine na-esite n'inwe ọtụtụ mkpụrụ ndụ T n'agha ahụ. Ihe si na ya pụta nwere ike ịbụ mbufụt gabiga ókè nke nwere ike ibute oke, ọbụlagodi mmebi anụ ahụ dị mma.
Nnyocha ọhụrụ ahụ na-eme ka ìhè dị na usoro mgbaàmà na ọkwa molecular. Ndị otu ahụ na-akọ na ọ dịkarịa ala ụzọ abụọ nwere onwe ha dị na-ebute mbufụt na ahụ. Ọ bụ ezie na e nwere ụzọ mbufụt a maara nke ọma na guzosie ike maka ịzaghachi ndị na-awakpo n'èzí, ọrụ a na-akọwa ụzọ a na-aghọtachaghị nke na-eme ka ọrụ mgbochi ọrịa "na-enweghị ọrịa" ma ọ bụ na-abụghị ọrịa metụtara.
Ozi olile anya maka nlekọta ọrịa kansa
Abụọ n'ime ihe na-akpali akpali nlekọta nlekọta ọrịa cancer n'afọ ndị na-adịbeghị anya bụ mmepe nke ndị na-emechi ihe nyocha na chimeric antigen receptor T cell therapy (CAR-T). Ụdị ọgwụgwọ ndị a na-enyere mkpụrụ ndụ T aka ịchọpụta na ibibi mkpụrụ ndụ kansa nke na-agbanarị ihe nchebe sitere n'okike nke ahụ na mbụ.
A kwadoro ọtụtụ ọgwụ dabere na teknụzụ CAR-T maka ọgwụgwọ patent na-alụ ọgụ nnukwu lymphoma B-cell (DLBCL), lymphoma follicular, lymphoma mantle cell, multiple myeloma, na B-cell nnukwu lymphoblastic leukemia (ALL). Ka ọ dịgodị. ọtụtụ ndị na-egbochi ihe nleba anya na-enyere ndị nwere ọrịa kansa akpa ume, ọrịa ara ara na ọtụtụ ọrịa ọjọọ ndị ọzọ aka. Ọgwụgwọ ndị a gụnyere atezolizumab (Tecentriq), avelumab (Bavencio), cemiplimab (Libtayo), dostarlimab (Jemperli), durvalumab (Imfinzi), ipilimumab (Yervoy), nivolumab (Opdivo), na pembrolizumab (Keytruda).
Otú ọ dị, maka ụfọdụ ndị ọrịa, ọgwụgwọ ndị a nwere ike ikwe ka ìgwè T-cell rogue wakpo anụ ahụ dị mma yana ọrịa cancer. N'ime usoro nyocha nke òké na ụlọ nyocha, ndị otu nyocha na Cincinnati Children's na-akọ na-achọpụta isi iyi nke mbufụt sitere na omume ọjọọ T cell a ma gosipụta ụzọ isi gbochie ya.
Pasare na-ekwu, "Anyị achọpụtala oghere nrịbama dị oke egwu nke mkpụrụ ndụ T Effective memory (TEM) na-eji chịkọta mmemme proinflammatory sara mbara n'ime usoro ahụ ji alụso ọrịa ọgụ." "Anyị chọpụtara na cytokine toxicity na autoimmune pathology nwere ike ịzọpụta kpamkpam n'ọtụtụ ụdị nke mbufụt nke cell T site na imebi akara ndị a site na ndezi mkpụrụ ndụ ihe nketa ma ọ bụ jiri obere ogige molecule."
Na-enweghị ọgwụgwọ, 100 pasent nke ụmụ oke mere ka ha nweta oké ifufe cytokine dị ka nke ọgwụgwọ CAR-T kpalitere nwụrụ n'ime ụbọchị ise. Ma pasent 80 nke ụmụ oke e ji ọgwụ mgbochi ọrịa agwọ ọrịa iji gbochie ihe mgbaàmà na-esite na mkpụrụ ndụ T arụnyere arụ ọrụ dị ndụ ma ọ dịkarịa ala ụbọchị asaa.
Nchọpụta adịghị emetụta COVID-19
Ọtụtụ ndị mmadụ nwere nnukwu ọrịa sitere na nje SARS-CoV-2 enweela oke mmiri ozuzo cytokine. Agbanyeghị, enwere ọdịiche dị oke mkpa n'etiti mbufụt sistemu nke ọrịa nje na-ebute na ụdị mbufụt nke “na-adịghị ike” nke mkpụrụ ndụ T na-arụ ọrụ kpatara.
Pasare na-ekwu, "Anyị achọpụtala ụyọkọ mkpụrụ ndụ ihe nketa nke mkpụrụ ndụ TEM na-ebute pụrụ iche nke na-adịghị etinye aka na nje virus ma ọ bụ nje nje," ka Pasare na-ekwu. "Nke a na-egosi mgbanwe dị iche iche nke usoro abụọ a nke ịgbalite ebumpụta ụwa."
Na tiori, a pụrụ inye ndị na-arịa ọrịa kansa ọgwụ mgbochi mmadụ yiri nke a na-eji na ọmụmụ òké tupu ha enweta ọgwụgwọ CAR-T. Mana achọrọ nyocha ọzọ iji chọpụta ma ụzọ dị otú ahụ ọ dị mma iji nwalee na nnwale ụlọ ọgwụ mmadụ.
Na mgbakwunye na ịme ụdị nlekọta ọrịa cancer na-ekwe nkwa ịnweta ọtụtụ ndị mmadụ, ịchịkwa ụzọ mbufụt a na-adịghị mma nwere ike inye aka maka ụmụaka ndị a mụrụ nwere otu n'ime ọrịa autoimmune atọ dị ụkọ, gụnyere ọrịa IPEX, nke na-akpata site na ngbanwe na gene FOXP3; Ọrịa CHAI, nke sitere na mmebi nke mkpụrụ ndụ CTLA-4; na ọrịa LATIAE, nke sitere na mmụgharị na mkpụrụ ndụ LRBA.
Ọzọ na: Science | Cincinnati